ट्याग: त्याग | Martech Zone
मँ जब सँधै अनलाइन चेकआउट प्रक्रियाको साथ ग्राहकलाई भेट्छु म आश्चर्यचकित हुन्छु र ती मध्ये कति जनाले वास्तवमै उनीहरूको आफ्नै साइटबाट खरीद गर्न प्रयास गरेका छन्! हाम्रो नयाँ ग्राहकहरु मध्ये एकको साइटमा उनीहरूले एक टन पैसा लगानी गरे र यो होम पेजबाट शपिंग कार्टमा जान to चरणहरू छन्। यो एक चमत्कार हो कि जुनसुकै व्यक्तिले यसलाई टाढा बनाउँदैछन्! शपिंग कार्ट त्याग्नु भनेको के हो? यो हुन सक्छ
शुक्रबार, मे 6, 2016 शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० Douglas Karr
कुनै श doubt्का छैन कि एक प्रभावी शपिंग कार्ट त्याग ईमेल अभियान कार्यहरु डिजाईनिंग र कार्यान्वयन। वास्तवमा, कार्ट त्याग ईमेलको १०% भन्दा बढी खोलियो, क्लिक गरियो। र कार्ट त्याग ईमेलको माध्यमबाट खरीदहरूको औसत अर्डर मूल्य सामान्य खरीदहरू भन्दा १%% बढी छ। तपाईं आफ्नो शपिंग कार्टमा आईटम थपेर तपाईंको साइटमा आगन्तुक भन्दा बढि अभिप्राय नाप्न सक्नुहुन्न! बजारका रूपमा, पहिले ठूलो प्रवाह देख्नु भन्दा अरु बढी दुखिरहेको छैन
खरीदको पथमा दर्जनौं पोइन्टहरू छन् जहाँ खुद्रा विक्रेताहरूले शपिंग अनुभव बृद्धि गर्न र ब्राउजरहरूलाई खरीददारहरूमा परिवर्तन गर्न डाटा स data्कलन गर्न र प्रयोग गर्न सक्दछन्। तर त्यहाँ यति धेरै डाटाहरू छन् कि गलत चीजहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न र पाठ्यक्रम खोलाउन सजिलो हुन्छ। उदाहरण को लागी, उपभोक्ताहरु को २१% आफ्नो कार्ट मात्र छोड्न किनभने चेकआउट प्रक्रिया अक्षम छ। खरीदको मार्गमा दर्जनौं पोइन्टहरू छन् जहाँ खुद्रा विक्रेताहरूले संकलन गर्न सक्दछन्